मेयोनेज सॉस - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
मेयोनेज थर्मोमिक्स® मार्फत बनाउनको लागि पहिलो सासहरूमध्ये एक थियो। र सत्य यो हो कि यो साधारण विधिमा थोरै ध्यान दिन लायक छ किनकि यो छ अन्य डिशको लागि पूरक पूरक।
मलाई यो कडा स्वादको कारण खरीद गरिएको मेयोनेज मनपर्दैन। मलाई मेरी आमाले बनाएको घरेलु मेयोनेजको पनि बानी थियो, त्यसैले मसँग मेरो आफ्नै मेसिन भएकोले म खुसी छु म यो गर्न तयार छु सलाद, भरिएका अण्डाहरू, तरकारी हलवा, माछा, आदि।
म सामान्यतया यो गर्छु हल्का जैतुनको तेलयद्यपि, नुस्खाले तपाईंलाई सूर्यमुखी तेल वा दुबै तेल मिक्स गर्ने सल्लाह दिन्छ।
1 मेयोनेस सस
यो चटनी व्यंजनको एक भीड को लागी सही संगति हो।
रेसिपी प्रकार: सॉस
खाना पकाउने समय: 5M
कुल समय: 5M
कोठाको तापक्रममा eggs अण्डाहरू
G 400 ग्राम हल्का जैतुनको तेल
Gar० ग्राम सिरका
हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको तेल तयार पार्नु हो र यसको लागि हामीले थर्मोमिक्सको बिर्कोको माथि एउटा भाँडो राख्छौं, मापन समारोह प्रेस र तौल तेल, हटाउने र आरक्षण गर्दै।
हामीले गिलासमा अण्डाहरू, भिनेगर र नुन राख्यौं। हामी प्रोग्राम १ मिनेट र १/२, तापमान º०º, गति 1।
समयको अन्तमा, हामी तुरून्त पुनः शेड्यूल गर्‍यौं गति 5, प्रोग्रामिंग समय वा तापमान बिनाए, हामी तेल बिस्तारै बिस्तारै ढकनीमा राख्छौं, बीकर नलगाईकन।
हामीले मेशिन रोक्दछौं जब हामीले सबै तेललाई समाहित गर्दछौं।
हामी भित्ताहरू र ढकनीहरूलाई स्पाटुलाको साथ घटाउँछौं, र हामी फेरि मिश्रण गर्दछौं Seconds० सेकेन्ड, गति 10।
हामी हटाउँछौं र एक चटनी डु boat्गामा सेवा गर्दछौं वा यसलाई स्वादिष्ट व्यंजनहरू तयार पार्न प्रयोग गर्दछौं।
थप जानकारी - गर्मीमा रमाउन dev शैतानका अन्डा रेसिपीहरू /Thermomix को साथ बनेको9मूल रूसी सलाद व्यंजनहरु
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » विशेष व्यंजनहरु » Celiac » मेयोनेस सस
अन्ना सउलेदा भन्यो
नमस्ते सिल्भिया, सबैभन्दा पहिले म तपाईंलाई आफ्नो व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यदि म मेयोनेजमा लसुन थप्न चाहान्छु, के मैले ती अण्डाहरू, नुन र भिनेगरको समान तापक्रममा राख्नुपर्दछ, र कुन वेगमा ठीक हुन्छ?
सबै कुराको लागि धन्यवाद। अभिवादन
अन्ना सौलेदालाई जवाफ दिनुहोस्
अन्ना, सबैभन्दा पहिले, हाम्रो व्यंजनहरू हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दोस्रो कुरा यदि तपाइँ लसुन थप्न चाहानुहुन्छ, यो राखिन्छ जस्तो तपाईले अण्डाहरू, नुन र सिरकासँग एकै पटक स्पीड5मा भन्नुभएको छ।
पुरी मोन्टेनेग्रो ग्यारिडो भन्यो
मलाई यो नुस्खा मनपर्‍यो। म भोली बिफल बनाउनेछु। म तिमीलाई भन्छु।
पूरि मोन्टेनेग्रो गेरिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
आउनुहोस् हामी हेर्नुहोस् कसरी पुरी, तपाईं हामीलाई बताउनुहुनेछ ...
म मेयोनेज धेरै राम्रो बनाउँछु, मलाई निम्बू धन्यवाद दिन्छु
मारिसालाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद तर म तपाईलाई लामो समय सम्म जान्न चाहान्छु
कसरी र कसरी?
भोरोलाई जवाफ दिनुहोस्
हेलो भेरो, मेयोनेज एकदम नाजुक चटनी हो र यो खराब गर्न सजिलो छ, र तपाई साल्मोनेलोसिससँग धेरै सावधान हुनुपर्दछ।
तसर्थ, यसलाई सँधै फ्रिजमा बन्द जारमा राख्नु पर्छ जुन हावामा हुदैन र तीन दिन भन्दा बढीको लागि राख्न सकिदैन।
तपाईंको व्यञ्जनहरु को लागी धन्यवाद !! म "सानो मेसिन" मा नयाँ छु भनेर उनीहरूले मलाई धेरै मद्दत गरिरहेका छन्।
र म नयाँ भएकोले, म यो भाग "ढक्कनमा, कप नहटाईकन" बुझ्दिन ... र त्यसपछि, तेल कहाँ थपियो? तह माथि? वा यसलाई ढाक्न बिना गरिन्छ?
हे ... माफ गर्नुहोस् यदि यो स्पष्ट छ, तर म यो बुझ्दिन।
आना, तपाइँको प्रश्न धेरै सामान्य छ, किनकि मलाई यो पहिले बुझ्नको लागि गाह्रो थियो। मसँग भाग्य छ कि म एक थर्मोमिक्स कक्षामा गएँ जुन मेरो बिक्री महिलाले मलाई आमन्त्रित गरे र उनीहरूले यो विधि बनाए। त्यसैले मैले यसलाई प्रत्यक्ष देखेको छु। यो मैले व्याख्या गरे झैं छ, पहिले तपाईले तेलको मात्रा तोक्नु पर्छ र तपाई यसलाई बरफको बाल्टिनको ढक्कनमा खस्न दिनुहुन्छ र अलि अलि गर्दै गिलासको छेउमा तल झर्दै छ। यसलाई उजागर नगर्नुहोस् वा मेयोनेज बाहिर आउने छैन।
सेना सिल्विया भन्यो
नमस्ते एलेना, म सेतो भिनाग्रेटमा चासो राख्छु जुन चिनियाँहरूले उनीहरूको सलादमा लगाउँदछन्, तिमीलाई थाहा छ यसलाई कसरी बनाउने?
एएनए सिल्भियालाई जवाफ दिनुहोस्
एलेना Calderon भन्यो
आना सिल्भिया, मलाई यो कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन, तर मलाई यो पनि धेरै मनपर्दछ र तपाईंले मलाई यसको सम्झाउनुभयो। म यो कसरी भयो भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्नेछु र तपाईंलाई बताउँछु। शुभकामना।
एलेना Calderón लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सिल्भिया, म सेतो भिनाग्रेटमा चासो राख्छु जुन चिनियाँहरूले उनीहरूको सलादमा लगाउँछिन्, तिमीलाई थाहा छ यसलाई कसरी बनाउने?
धन्यवाद सिल्विया। मैले पहिले नै पत्ता लगाइसकेको छु कि कप कतै पनि बन्द हुँदैन! अब मैले बुझें, हे।
मलाई खुशी छ कि तपाईले बुझ्नु भयो, तपाई आफैले जाँच गर्नु भन्दा राम्रो अरू केहि छैन।
ओलाआ भोई एसर उही मेयोनेज एक्सरो ममा श doubt्का छ र यो यो मसँग छैन जुन मसँग अर्को डु boat्गा प्रयोग गर्ने मसँग यो सेवा गर्न सकिन्छ?
Jubilo89 लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ, Jubilo89। जब सम्म यसले गोब्लेटको रूपमा समान कार्य गर्दछ, उत्तम। शुभकामना।
नमस्ते केटीहरू !!
तपाईंसँग कार्बोनरा सस रेसिपी छ? मैले यसलाई विभिन्न फोरममा देखेको छु र त्यहाँ अन्डेहरू हाल्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, जसले नगर्ने आदि। तपाईं यो कसरी गर्नुहुन्छ?
धन्यबाद, तपाईं मेरो लागि ठूलो मद्दत हुनुहुन्छ, म जे गर्छु प्रायः सबै तपाईंको ब्लगबाट हो!
सिल्भियालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले गल्तीबाट फूलगोभीमा यो टिप्पणी राखेको छु तर फेरि राख्नेछु।
हिजो मैले मेयोनेज गरें र बाहिर आइन। मैले आधा सामग्रीहरू, एउटा अण्डा र २०० जैतुनको तेल राखें, तर यो एकदमै सजिलो थियो। मलाई थाहा छैन यो समय थियो कि किनभने यो तोकिएको छैन किनकि केवल तेल खस्दा सम्म, मैले यो यस्तो गरें तर मलाई थाहा छैन के असफल हुन सक्छ, वा यो वास्तवमै तरल हो। शुभकामना। यद्यपि म अर्को दिन फेरि प्रयास गर्नेछु। व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
सिल्भिया, यो बर्सिएको हुनुपर्दैन। समय हो जब तपाईं तेल खन्याईरहनु भएको छ, त्यसपछि तपाईंले केही सेकेन्ड पर्खनुहोस् यो मिसिनको लागि र मशीनलाई रोक्नको लागि। कहिलेकाँही यो हुन्छ कि अण्डा धेरै ठूलो हुँदैन र तरलको मात्रासँग यो धेरै बाक्लो हुँदैन।
नमस्ते, मैले मेयोनेज बनाएको थिएँ र म हाँस्दै थिएँ
ग्लोरियामा जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई ग्लोरिया मन परेकोमा म खुशी छु। शुभकामना
सबैलाई नमस्कार, एक प्रश्न, सिल्भिया, के तेल थप्नु अघि, सुरूमा तापक्रम सेट गर्नु आवश्यक छ? सत्य यो हो कि म सामान्यतया यो चटनी घरमा बनाउँछु, मेरो श्रीमान् र जेठो छोरा यसको बारेमा उत्साहित छन्, तर यसलाई heatingºº मा तताउने यो मैले पहिलो पटक सुनेको छु। म आशा गर्दछु कि तपाईले मेरो लागी सफाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईको कामका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईलाई थाहा छ म तपाईलाई दैनिक जान्छु।
मारियोनलाई जवाफ दिनुहोस्
अण्डा र भिनेगरलाई heat० to मा तताउन महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले अण्डाहरूको कुनै पनि कीटाणु मार्न र साल्मोनेलाबाट बच्न तापक्रमलाई मद्दत गर्दछ।
ठीक छ, सिल्भिया, यो मिल्यो। मेयोनेज, राम्रो, लक्जरी! चुम्बन
नमस्ते केटीहरू, एक सानो प्रश्न, जब म मेयोनेज बनाउँछु तर बिना मेसिन, म सधै निम्बू थप्दछु, तर मैले कहिल्यै सिरकाको बारेमा सुनेको छैन। तपाईं कागतीको लागी सिरका परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंलाई कति थप्न चाहानुहुन्छ।
मोनिकालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार मैले पहिले पनि मेयोनेज धेरै पटक बनाइसकेको छु र यो निकै राम्रो जीज हो, अब म यो जान्न चाहन्छु कि यो नै नुस्खा बनाउन सकिन्छ तर अण्डा बिना, कि दूधको साथ, र यो कसरी गर्न सकिन्छ?
स्टेफालाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो नुस्खा ल्याक्टोन्सिया हो, यो तयार हुने बित्तिकै म त्यसलाई प्रकाशित गर्छु तर यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने म तपाईंलाई यो लिंक छोडेर यसलाई हेर्नेछु।
सबै रेसिपीहरूको शानदार मेयोनेज जसले सबै भन्दा राम्रो बनायो र 80० डिग्री ताप को ताप द्वारा पनि अण्डाका कीटाणुहरू मारिएन किनकि धेरै शान्त म तपाईको ब्लगको साथ हामीलाई दिएको सबै सहयोगका लागि धन्यबाद छु।
Garbaña लाई जवाफ दिनुहोस्
ब्रेडेड चोरिजो, हेम र मोजारेल्ला केक
ईल्स र झींगाको साथ स्पेगेटी